Hargeysa(Gebogebonews)-Hay’adaha Caafimaadka ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa xuduudka Wajaale ee dhinaca Itoobiya shalay ka qaaday haweenay u dhalatay qoomiyada Oromada oo lagu arkay astaamaha xanuunka Covid_19.
Sahra Maxamed oo da’deeda lagu sheegay 45 jir ayaa ka timid magaalada Burco, waxaana la sheegay in markii ay u talowday xuduudka dalkeeda Itoobiya lagu arkay astaamaha xanuunkan, waxaana lagu qaaday gaadhi ambalaas ah iyadoo la geeyay magaalada Jigjiga si loogu sameeyo baadhis dheeraad ah.
Xoggo uu wargeyska Geeska Afrika ka helay xafiiska caafimaadka ee magaalada Jigjiga ayaa sheegay in gabadha oo ka timid Burco, ay shalay isu martay Burco ilaa wajaale. Gabadha ayuu naqasku si deg-deg ah u qabtay iyadoo ku jirta mid ka mid ah bangiyada Itoobiya ee ku yaaLla Wajaale, waxaana qabatay xumad saa’id ah. Markaas ayaa loo qaaday cisitaal ku yaalLa magaalada Jigjiga.
Waxa ay dhakhaatiirta Jigjiga qaar ka mid ahi Geeska Afrika u sheegeen in haweenaydu leedahay astaamo muujinaya in xanuunku hayo sida qufac, xumad joogto ah iyo naqaska oo qabanaya, waxaana xalay lagu xidhay Oxygen.
Haweenaydan ayaa la filayaa in isla maanta dhiigeeda lagu sameeyo baadhis buuxda, iyadoo magaalada Jgijiga la keenay qalabka shabyaadhka ee xanuunkan.
Warbaahinta baraha bulshada ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa aad u baahiyay warkan, waxaanay sheegeen in haweenaydan lagu xareeyay goob loogu tallo galay dadka xanuunkan looga shakiyo.